Aw-Jaamac Cumar Ciise | buug.ga
Būgta qorāga: Aw-Jaamac Cumar Ciise
09/08/2018 Aw-Jaamac Cumar CiiseQaranjabkii Soomaaliyamaamul
Gogoldhig iyo Xog Waran
Taariikh Murtiyeed Kooban
Doorashadii Cod Khasaaray 1969kii
Kacaankii Guuldarrada Reebay
Balanqaadkii Golaha Sare ee Kacaanka 1969kii
Goormaa la Kala Garan?
Siduu Kacaanku Diinta Islaamka ula Dhaqmay?
Sidee Maxamed Siyaad 21 Sano Xukunka ku Haystey?
Ciidanka Nabadsugidda (En.Es.Es.)
Xabsiyadii Kacaanku Dhisay
Hab-Maamulkii Siyaad Barre
Golayaashii Kicinta Bulshada ee Kacaanka
Golayaasha Hanuuninta Dadweynaha
Hobolada Qaranka ee Waaberi
Ubaxa Kacaanka Oktoobar
Gabagabadii oo Kooban
Xaggee ku Danbeeyeen Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed?
Hawlgalladii Lagu Dumiyey Dawladii Soomaaliya
Bayaankii Muqdisho ee 15/5/1990kii
Bayaanka Muqdisho ee Koowaad – 15 Maajo, 1990
Wallee ina-Raagoow Tala Adduun Taada uun Maaha
Waxa Soo Socda Nimaan Garani Waxa Joogaa ma Garto
Maxaa Dhaliyey Dagaalkii Abgaal iyo Gaalgale?
Kacdoonkii Muqdisho 30/12/1990kii
Doorashadii Cali Mahdi
Muqdisho iyo Maamulkii Ururkii Yuu.Es.Sii
Dagaal Qabiil iyo Dawladnimo Kala Fogaa
Heshiiskii Jabuuti Yaa is Hortaagay?
Tolalka Soomaaliya iyo Degaannadooda
Hawiye iyo Xawaadle
Ciise iyo Gudabuursey
Soomaaliya ma Qaran baa Mase waa Qabiil?
In qabiil la isugu hiiliyaa ma banaan tahay?
Qabiil iyo Iimaan La’aan
Taariikhda Muqdisho oo Kooban
Labada Magac ee Magaalada
Goormaa Muqdisho la Degey?
Duufaan Madow ma Mujaahidiin baa?
Dil Bareer ah
Soomaaliya Halkee Gaartey Halkeese Maanta Joogtaa?
Maxaa Sababay Masiibadii Soomaaliya ku Habsatay?
Jaahilnimo Soomaalida Dabooshay
Boobka iyo Xatooyada Hantida Qaranka
Tartan iyo Isugu Faan
Xasad iyo Iimaan La’aan
Dayaca iyo Dhaqaala Xumaanta Xoolaha
Qabiilku Waa Cudur Wax Halaaga
Xukun-doon Qabiil iyo Qoray iyo Qaad Adeegsaday
Caro iyo Ciqaab Eebbe
Burburka iyo Baaba’a Dagaaladii Qabiil Sababeen
Soomaaliya iyo Qaramada Midoobey
Soomaaliya iyo Dawladda Mareykanka
Hawlgalladii Yunosom-ti 2aad
Sidee Qarannimadii Soomaaliya Kusoo Noqon Kartaa?
Ummadda Soomaalidaa caalamku wuxuu u haystey shacbi isku mid ah, isku isir ah, wada dhashay, isku diin ah boqolkiiba-100 Muslin ah, isku af ah, luqo keli ku wada hadla, isku dhaqan ah. Hase ahaatee, qarnigaan 20aad dabayaaqadiisa waxaa soo if baxay sidii loo haystey fikrad ka duwan, waayo? Waxaa lala yaabay sidey isu gumaadeen, isu dhaceen, u heshiin waayeen; iyo naxariis la’aanta, nacaybka iyo colaadda fogaatey oo ay isu qabaan.
Haddaba, mar hadday ummadi weydo madax aqoon leh eex iyo caadifad qabiil ka fiyoow oo dalkooda iyo dadkiisa daacad u ah, una hagar baxda, waddada toosanna ku hagaajiya, wanaagga ugu yeera xumaantana ka reeba, waxaa hubaal ah in ummaddaas dhexdeeda kala-jajab iyo kala-yaac ku dhacayo.
Waxaan marar badan xusnay 1990kii ilaa 1994kii in ay dalka Soomaaliya ka dhacday wax aan horey dhegi maqal dhaayana loogu arag, taariikhdana loogu sheegin waxa buugani qoraayo haddii loo eego wixii Soomaaliya ka dhacay markii 100 meelood loo qaybiyo meel ahaan ka yar, hase ahaatee waaya arag baa yiri, “Shilkii dhacaba waayaha danbaa sheeko ka hartaa.”
Haddaba, qofkii maanta is yiraahda masiibadii Soomaaliya ku habsatey iyo mashaqadii dagaalladii qabiil sababeen wax ka qor, waxa uu la mid yahay qof dhoobo dhiiqa ah cagaha la galay, waa qof diyaar u noqday cay iyo ammaan, cambaarayn iyo bogaadin, waayo? Waxaa suuragal ah in dadweynuhu buugaag u bogo oo ammaanaan, waxaa la arkaa in dadka qaarkiis dhaliilaan markey ku arkaan wax aaney jeclayn, ama ka waayaan wax ay jeclaan lahaayeen, sababtuna waxaa weeye maahmaahdii ahayd, “Maan dad waa mudcanyo afkood,” ama “Wixii nin la toosani nin la tuur leh.” Sidaa darteed, garsoorka waxaa ku filan dadweynaha, siiba qoreyaalka iyo aqoonyahannada.
Qoraagu wuxuu isku hawlay in uu wax ka iftiimiyo dhacdooyinkii taariikheed ee Soomaaliya ka dhacay 1960kii ilaa 1994kii gaar ahaan burburkii dawladeed iyo baabi’ii deegaan, kala-jajabkii shacbi iyo guud ahaan qaranjabkii Soomaaliya. Buugga waxaa loo qaybiyey afar waaxood oo waax walba gaarkeeda u habeysan tahay, wuxuu buuggu ku qoran yahay af-Soomaali fudud oo dadku wada fahmi karo.
Waaxda koowaad waxay si kooban uga warramaysaa gobanima qaadashadii Soomaaliya tan iyo Kacaankii guusha ku bilowday guul darradana ku dhammaaday.
Waaxda labaad waxay ka hadlaysaa hawlgalladii lagu dumiyey dowladii Soomaaliya iyo ururadii qabiil ee mucaaridka ku ahaa.
Waaxda saddexaad waxay si kooban uga warbixineysaa dagaalladii qabiil iyo dhibaataday abuureen iyo darxumadii ka dhalatay.
Waaxda afraad waxay faallo ka bixineysaa heerkii Soomaaliya gaartey halkeyse maanta adduunka ka joogto, masiibadii ku habsatay iyo sidii caalamku ugu soo gurmaday.
Buugga waxaa lagu habeeyey hab dhaqankii Soomaalida, waxaa ku jira suugaan fara badan oo dhaxalgal ah: gabayo, maahmaah iyo halqabsi. Qoraagu wuxuu door biday in aan magaca qabiil la qarqarin, waayo qabiilku waa dabkii Soomaaliya gubey, buugga ka hadli maayo siyaasadihii reer Galbeedka ee guracnaa iyo shaxdii Soomaaliya loo degey.
1990kii ayaa idaacadda Bii.Bii.Sii-da barafasoor Soomaali ah, waayo arag ah waxay weydiisey su’aal ah: sidee aayaha Soomaaliya noqon doonaa, jabhaduhuse ma dhaami doonaan taliska jira? Isagoo isticmaalaya jawaab dadban wuxuu yiri, “Waxay ila tahay intaan samada la tegin waa in cadaabtii la tagaa, markii cadaabta laga soo baxo waa laga yaabaa in wax hagaagaan.” Haddaba, iyadoo xilligii dowladdii Maxamad Siyaad Barre madaxda ka ahaa dhacday ka soo wareegtey afar sano oo cadaab adduun ah, ciidamadii Qaramada Midoobey la gudoomay in ay Soomaaliya ka baxaan, ayaan u muuqan mustaqbal wanaagsan oo lagu yididiiloodaa arrintu siday noqon doontana Eebbaa og.
Continue reading Qaranjabkii Soomaaliya →
11/07/2018 Aw-Jaamac Cumar CiiseDiiwaanka Gabayadii Sayid Maxamed Cabdulle Xasanmaamul
Sida la og yahay ummad kasta oo af, dhaqan iyo hidde wadaagta waxay leedahay murti iyo suugaan u gaar ah oo ay ku hirtaan. Hal-abuurayaasha dejiya suugaantaasna waxaa la og yahay iney door weyn ka cayaaraan isuduwidda, kicinta iyo horumarinta ummaddaas.
Sayid Maxamed wuxuu ka mid yahay abwaannada waaweyn ee taariikhda Soomaalida meel ka galay. Taasna waxaa u aqoonsan dadkiisa iyo dadyowga kale markay u sugnaatay inuu ahaa geesi waddani ah, gabyaa aftahan ah, buuni cilmi leh, siyaasi xirribbo badan. Intaaba waxaa marag u ah gabayadiisii jaad walba leh, waxaana garan kara qofkii murtidiisa dhuuxa marka laga eego xagga suugaanta, siyaasadda, wadaninnimada iyo aftahannimada ku jirta.
Diiwaankan waxaa ku qoran 120 gabay oo Sayid Maxamed tiriyey intii u dhexeysay 1904tii – 1920kii, iyo 16 gabay oo gabayada Sayidka xiriir la leh. Guud ahaan waxay gabayadaasi muujinayaan dhaqankii Soomaalida iyo heerkii suugaantu waqtigaas joogtay. Wixii gabay, geeraar iyo jiifto Sayidka laga hayey, oo saddex cay ah oo gaaban nisbadooduna aynan sugnayn ma’ahee, intii kale halka ayey ku dhan yihiin.
Marka waxbarasho guud mooyee, waxay gabayadu albaab weyn u furayaan qoraalka suugaanta af-Soomaaligu hodonka ku yahay. Waxayna dhaxal u noqon doonaan dadka danbe ee wax qori doona. Kuwaas oo buuggan ka heli doona tusaalooyin badan oo waxtar u leh.
Odayaashii tan iyo muddo dheer u guntaday inay uruuriyaan ka dibna qoraan buuggan, waxaa sharaf iyo abaalmarinba ugu filan inay wariyeen wixii mahadho Sayidka laga hayey, anaguna waxay naga mutaysteen mahad iyo ammaan.
Jaale Maxamed Aadan Sheekh
Wasaaradda Hiddaha iyo Tacliinta Sare.
Continue reading Diiwaanka Gabayadii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan →